Ilhaan Cumar oo weerar afka ah ku qaadday Ra'iisulwasaaraha Hindiya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaIlhaan Cumar oo weerar afka ah ku qaadday Ra’iisulwasaaraha Hindiya
Ilhaan Cumar oo weerar afka ah ku qaadday Ra’iisulwasaaraha Hindiya
Hindiya ayaa ah dalka labaad ee ay Muslimiinta ugu badan ku noolyihiin caalamka, balse tirada Musliiminta ah ee ku jira baarlamaanka ayaa aad u yar.
Waa uu is casilay, wuxuuna soo afjaray muddadii 10-ka sano ahayd ee uu ku jiray baarlamaanka dalka.
Ka dibna wuxuu is sharaxay isaga oo madax bannaan.
Ganacsade Muslim ah oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi bari ee Assam ayaa la weeraray xilli uu kasoo baxayay goobtiisii shaqada.
Shaukat Ali, waxaa weerartay koox amartay inuu jilbaha dhulka dhigto, jir dilna ku samaysay.
“Bangladeshi miyaa tahay”? Ayuu mid ka mid ah weydiiyay, iyaga oo weydiinaya inuu yahay muwaadin dalka u dhashay.
“Maxaad halkan hilibka ugu iibisaa”? ayuu mid kalana weydiiyay.
Dadweynihii isugu soo baxay halkaas ayaan sameynin wax dadaal ah oo ay ku badbaadinayaan ninkan, iyaga oo la soo baxay telefonadooda si ay dhacdadaan u duubaan.
Xisbiga talada haya ee Bharatiya Janata Party (BJP) ayaa 7 musharax oo kaliya waxay ku lahaayeen bulshada Muslimiinta ah, waana markii ugu horreysay ee taariikhda dowladda Hindiya uusan jirin hal qof ka tirsan xisbiga talada haya oo baarlamaan ah oo matala Muslimiinta.
Doorashadii 2014-kii, tirada xildhibaanada ayaa noqotay 464 balse 31 ka mid ah musharaxiinta tartameysay ayaa ahaa Muslimiin, laakiin 7 kaliya ayaa ku guulaysatay.
Wax badan iskama aysan badelin doorashadii hada gabagabowday.
“Weerar ka dhan ah diinta”
Bil ka dib Mr Ali wuxuu hadda ku dadaalaya sidii uu ku socon lahaa.
“Waxay igu garaaceen ul, waxay iga dharbaaxeen wajiga,” Ayuu yiri isaga oo warbaahinta tusinaya dhawaawacyada soo gaaray.
Muddo toban sano ah waxay qoyskiisa iibin jireen hilibka lo’da, balse weligood ma aysan wajahin dhibaatadan.
Gobollada qaar ayaa waxa laga mamnuucay iibinta hilibka lo’da maxaa yeelay Hindida qaar ayaa waxay caabudaan lo’da.
BJP ayaa waxay ilaaliyaan siyaasaddooda ujeedadoodana ayaana ah inay ka hortagaan soo galootiga sharci darada ah, balse waxaa cabsi dhab ah laga qaba inay Muslimiinta cayriyaan.
Awoodda Hindiya ayaa ku tiirsan kala duwanaanshahooda. Balse dad badan ayaa ka cabsanaya xiisadda siyaasadeed ee hadda jirta inay dhibaato abuuri karto.
Shan dabeecadood oo haweenka dib u dhiga iyo sida lagu beddeli karo